भाईरल गायिका कमला घिमिरे र मिलनले इन्द्रेणीको गाएको यो दोहोरी भाईरल (भिडियो सहित)
December 15, 2020 1485
दोहोरीमा अब्बल धादिङकी कमला घिमिरे यति’बेला सामाजिक संजालमा भाइरल बनेकी छन्। सानै उमे’रमा लाइभ दोहोरी गाएर सबैलाई चकित बनाएकी कमलाको चर्चा ह्वातै बढेको छ।
छिनभरमै दोहो’रीको टुक्का फुराउने कम’लाको कला देखेर सबै चकित छन्। प्रख्यात गायक गायिका’लाई समेत दोहोरी’मा टक्कर दिने क्षमता भएकी कमला अहिले सबैको हा’ईहाई बनेकी छन् । दोहोरी गाउन खप्पिस कमला’को स्वर पनि ज्यादै सुरिलो छ।
कमला उमेरले ११ वर्ष लागिन्। बुबा कल्या’ण घि:मिरे र आमा देवकी घिमिरे , ९ वर्षको उमेर:मै स्कुलका साथीभाई, घरछिमेकमा दोहोरी गाएर चकित पार्ने गर्थिन्। विद्यालयका प्रति’योगीतामा भाग लिई कुनै न कुनै पोजिसन जितेकै हुन्छिन्। गाउँमा हुने चाडपर्व, विवाह लगायतको उत्सवमा उनको गीतमा रमाउनेह’रुको ताती लाग्छन्।
परिवारका कुनै सदस्य गीत संगीतमा ला’गेका छैनन्। न कसैले गीत गाउँछन् न त उनको गीतमै रमाउँछन्। ज्याला मजदुरी र घरायसी काम गरेरै बिहान बेलुका’को छाक टार्दै आइरहेको कमलाका आमा देवकी घिमिरेले छोरीले दुःख र संघर्षको गीत गुन्गु’नाइ रहने बताइन्। ‘छोरीको प्रगति देखेर खुसी लागेको छ’, खुसी’को आशु निकाल्दै उनले भने, ‘भगवानले छोरीको प्रतिभालाई चिन्यो।’
सानैदेखि गीत संगीत भनेपछि हुरुक्कै हुन्थिन्, रेडियो, टिभीमा बजेको गीतका भाकाहरु टपक्कै टिप्थिन्’, उनले भने, ‘पहिले वि’द्यालय र छिमेकमा मात्रै सि’मित थियो, अहिले छोरीको प्रतिभालाई सबैले चिनेका छन्।’ अहिले पछिल्लो समय उनी देश विदेश सवै घुमिस’केकी छिन । अब प्रस्तुत छ कमला घिमिरे र मिल’न टमटाको आज’को दोहोरी ।
Prevसमुद्र किनारमा अनौठो वस्तु भेटेपछि आमाछोरीले घरमा ल्याए, झण्डै गयो ज्यान !
Nextआज पनि घट्यो सुनको मूल्य, तोलामा कति झर्यो ? हेर्नुहोस्
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (136469)